최종편집 : 2021-04-16 20:21 (금)
Park Bom successfully weight loss 11kg... Preliminary trial for the May issue of 'TENSTA' begins
박봄, 11kg 감량성공…'텐스타' 5월호 예판 시작
Brave Girls appeared in SBS 'Tikita CAR' with an unexpected connection with 4MC
브레이브걸스, SBS '티키타카' 출연…4MC와 인연 깜짝 공개
ASTRO wins first place in 'M Countdown' after debut with3first awards in music broadcasting sites
아스트로, 음방 3관왕 데뷔 후 '엠 카운드다운' 첫 1위
HIGHLIGHT comeback with mini-album 'The Blowing' after3years and7months
BTS 美 빌보드 '핫100' 18번째 1위, 싸이 빌보드 기록 깼다!
이보영X김서형 드라마 '마인' 포스터 공개
TVXQ U Know Yunho ဆွဲဆောင်မှုကောင်းသော 1stLook ဓာတ်ပုံများ ဖြန့်ချိခဲ့သည်
ဂီတနှင့်ပရိတ်သတ်များအပေါ် စိတ်ရင်းအမှန်ရှိသော U Know Yunho ၏ romanticဆန်သော ပုံစံ ပါ၀င်သည့် noir concept ဖြင့် ဓာတ်ပုံကို ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ နေဝင်ချိန်မှ မှောင်မိုက်သောညအထိ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ပြီး romanticဆန်သော ပုံစံကို တွေ့နိုင်သည်။U Know Yunho သည် တာ၀န်ယူတတ်သောခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၊ အကဘုရင်၊ စိတ်အားထက်သန်သောလူ
K-POP | Nang 기자 | 2020-11-20 18:16
Chloe Moretz နှင့်အတူ 'Tom and Jerry' လူအစစ်ဗားရှင်းကို နိုင်ငံခြားတွင် trailerကို ပထမဆုံး ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
[ဓာတ်ပုံကို ကြည့်ရန်] ယခုနှစ်သည် 80 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နှစ်ဖြစ်သည်။ Tom နှင့် Jerry သည် အကယ်ဒမီဆု ၇ ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည့် လူကြိုက်များသော ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပြီး ကာတွန်းနှင့် ဖျော်ဖြေမှုပေါင်းစပ်မှု လူအစစ်ဗားရှင်းရုပ်ရှင်အဖြစ် ပြန်လည်အသက်ဝင်လာသည်။Chloe Moretz သည် လူအစစ်ဗားရှင်းရုပ်ရှင်တွင် အဓိကသရုပ်ဆ
ENT | Khaing 기자 | 2020-11-20 18:13
Yuna Lim သည် 'ESTÉE LAUDER' ၏ muse အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်
၁၈ ရက်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော ဓာတ်ပုံတွင် Lim Yoon-ah သည် သူမ၏အလှအပနှင့် မိတ်ကပ်ကို ဘယ်angleကမဆို လှနေကြောင်း ESTÉE LAUDER မော်ဒယ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြသခဲ့သည်။သဘာဝလှပသော ဆံပင်ပုံစံနှင့် သူမသည် တောက်ပသောအနီရောင်နှုတ်ခမ်းမိတ်ကပ်နှင့် အေးဆေးတည်ငြိမ်သောမိတ်ကပ်ဖြင့် သူမ၏ပြီးပြည့်စုံသော အလှကို ပြသခဲ့သည်။Yoona သည် အ
ENT | MoMo 기자 | 2020-11-19 21:13
Harry Potter သရုပ်ဆောင်များ 19 နှစ်အတွင်း ပထမဦးဆုံး စုဝေးတွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်!
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်သည့်နေ့ဖြစ်သော နို၀င်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် ၁၉ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကို ကျင်းပရန် “Virtual Alumni Association” (မျက်နှာချင်းမဆိုင် တွေဆုံခြင်း)ကို Veeps မှတဆင့် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှုကို စီစဉ်သူမှာ Tom Felton ဖြစ်ပြီး Harry Potter ၏ပြိုင်ဘက် Draco
ENT | Nang 기자 | 2020-11-19 21:12
GQ 'Person of the Year'အဖြစ် "Lee Dong Wook • IU • Henry • Crush"၏ မဂ္ဂဇင်းဓာတ်ပုံများကို ဖော်ပြခဲ့သည်
GQ ကိုးရီးယားသည် '၂၀၂၀နှစ် Person of the Year'အဖြစ် Lee Dong Wook၊ Rain၊ IU၊ Henry၊ Crushကို ဒီနှစ်၏ Person of the Yearကို ရွေးချယ်ပြီး သူတို့နှင့်အတူ ဒီဇင်ဘာလ မဂ္ဂဇင်းကာဗာဓာတ်ပုံကို ၁၉ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။'Man of the Year' တစ်နှစ်အတွင်း လူအများအပြား စိတ်ဝင်စားပြီး စွန့်စားခြင်း creativeဖြစ်သော
ENT | Nang 기자 | 2020-11-19 21:10
Henry (၆) နှစ်အကြာမှ Journey မီနီအယ်လ်ဘမ်ဖြင့် comebackလုပ်ခဲ့သည်
အေဂျင်စီ Monster Entertainment Group မှ Henry၏ တတိယမြောက်အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သည့် JOURNEY တွင် သူ၏ဘဝနှင့် ဂီတနှင့်ပတ်သက်သော ယုံကြည်မှုများနှင့် ပေးချင်သော အကြောင်းအရာများ ပါရှိသည်။ ထို့အပြင် ထုတ်ဝေမည့်အကြောင်းအရာများအတွက် အယ်လ်ဘမ်ဖြန့်ချိခြင်းဖြင့် အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများ ပြင်ဆင်ထားသည့် ဟင်နရီ၏ ထူးခြာ
K-POP | Khaing 기자 | 2020-11-18 20:57
'Disney Princess ရုပ်ရှင်ထဲနှင့် အမှန်တရား' သည် အလွန် ရယ်မောဖွယ်ကောင်းသည်
Illustrator Andhika Muksin ၏ သရုပ်ဖော်ပုံများမှာ Disney နှင့်ဆက်နွယ်နေပြီး Disney၏ ပရိသတ် အစစ်ဖြစ်ကြောင်း ကျော်ကြားသည်။Illustrator အနုပညာရှင် Andhika Muksin ၏ Disney ဇာတ်ကောင်များဘအပေါ်ထားရှိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အဖြစ်မှန်ဖြင့် ကြည့်ရှုသူများကို ရယ်မောစေသည်။Andhika Muksin သည် Disney ၏ ဇာတ်ကောင်များက
ENT | Khaing 기자 | 2020-11-18 20:55
“Run On” Lim Si-Wan နှင့် Shin Se-kyung တို့၏ အချစ်ဇာတ်လမ်း
ကွာတို အပြေးသမား 'Ki Seon-gyeom' (Lim Si-wan)သည် နောက်လှည့်ကြည့်တာနဲ့ ရှုံးမည့် နေရာတွင်နေထိုင်နေပါသည်။ ကြိုက်နှစ်သက်သောသူဆီကို သွားနေသည့် လမ်းတွင် ခြေလမ်းဟာ ပေါ့ပါးနေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကြွက်သားဒဏ်ရာရသွားပြီး အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာ ပြေးတဲ့သူက Mijoo ကိုတွေ့ပြီးမှ စတင်ပြေးသည်။ အသက်ရှူကြပ်နေစဉ်တွင် M
ENT | Nang 기자 | 2020-11-18 20:47
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လှုပ်ရှားမှုများကိုရပ်စဲခဲ့သော 'One Direction' အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း အဆိုတော် Harry Styles
သူသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဖက်ရှင်လုပ်ငန်း၌ ကြီးမားသော event တစ်ခုဖြစ်သည့်'MET Gala'ပူးတွဲကျင်းပခဲ့သည်။Harry Styles သည် Vogue မဂ္ဂဇင်း၏ ယောကျာ်းလေးမျက်နှာဖုံးကို ပထမဆုံး ရိုက်ရသူဖြစ်သည်။'VOGUE'၏ ဒီဇင်ဘာလထုတ် မျက်နှာဖုံးနှင့် အင်တာဗျူးကို 'VOGUE' ၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။သ
ENT | Nang 기자 | 2020-11-18 20:43
Gossip Girl reboot သည် 8 နှစ်အကြာတွင် ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မည်
Netflix မကျော်ကြားခင် ကတည်းက ကမ္ဘာအနှံ့ လူကြိုက်များခဲ့သော အမေရိကန် HBO ဒရာမာကို ကြိုက်နှစ်သက်သူများနှင့် ဖက်ရှင်ကို နှစ်သက်သူများသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇာတ်လမ်းတွဲစီးရီး ၆ ပြီးဆုံးပြီးနောက် ပြန်လည်စတင်မည် ဖြစ်သော GOSSIP Girl ဒရာမာ သတင်းဖြစ်သည်။အ‌ရောင်အသွေးစုံလင်းပြီး စတိုင်ကျသည့်ဖက်ရှင်နှင့် အနည်းငယ်လှုံ့
ENT | Nang 기자 | 2020-11-17 18:21
SHINee Minho, ယနေ့(၁၆ရက်)တွင် စစ်တပ်မှ ထွက်လာသော အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် 'V Live' ထုတ်လွှင့်မည်။
Minho သည် မနေ့ (၁၅ရက်) နေ့တွင် ရေတပ်မှ စစ်မှုထမ်းဆောင်ပြီးခဲ့သည်။ စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းဆိုလျှင် ပြီးခဲ့သည့်လ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက် စစ်မှုထမ်းဆောင်မှု မပြီးခင် အားလပ်ရက် ရသောကြောင့် အိမ်တွင် စစ်မှုထမ်းဆောင်ခြင်း ပြီးနိုင်သောလည်း မျိုးချစ်စိတ်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုတွင် ပါ၀င်နိုင်ရန် အားလပ်ရက်ကို ပြန်အပ်ပြီး စစ်
K-POP | Nang 기자 | 2020-11-17 18:18
အဆိုတော် Lee Seung-giသည် ၅ နှစ်အကြာမှ “The Ordinary Man” သီချင်းအသစ်ကို ပြသခဲ့သည်
လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အယ်လ်ဘမ် 'Meet Someone Like Me' ပြီးနောက် ငါးနှစ်အကြာမှ ဂီတလုပ်ငန်းသို့ပြန်လာခဲ့သူ Lee Seung-gi သည် ၁၅ ရက်နေ့ ည ၆ နာရီတွင် ၇ ကြိမ်မြောက် အယ်လ်ဘမ် မထုတ်ဝေမီ ကြိုတင်ဖြန့်ချိသောသီချင်း'The Ordinary Man' ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုနေ့ည ၉ နာရီတွင် Naver NOW က The Ordinary Man Lee S
K-POP | MoMo 기자 | 2020-11-17 18:14
Hwang Minhyun x Jung Dabin . နို၀င်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်သော“ Live On”ဇာတ်လမ်းတွဲ ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်သည်!
“LIVE ON” သည် သံသယဖြစ်ဖွယ် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသံလွှင့်ဌာနသို့ ၀င်ခဲ့သည့် Seoyeon အထက်တန်းကျောင်းနာမည်ကျော် Baek Ho-rang (Jung Dabinမှပါဝင်သည်) သည် Eun-Taek Go (Hwang Min-hyun မှပါဝင်သည်) တင်းကြပ်သောအသံလွှင့်မန်နေဂျာနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ။NU'EST အဖွဲ့၀င် Hwang Min-hyun ၏ ပထမဆ
ENT | Khaing 기자 | 2020-11-16 17:44
STAYC, 'SO BAD'သီချင်းဖြင့် “Music Bank” တွင် ပွဲဦးထွက်ခဲ့သည်
SRAYC အဖွဲ့မှသူတို့၏ပထမဆုံး single album Album 'Star To A Young Culture' ကို မနေ့က (၁၂ရက်) နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုသီချင်းများထဲမှ “SO BAD” သီချင်းသည် ၁၃ ရက်နေ့ KBS 2TV “Music Bank” မှတစ်ဆင့် ပွဲထုတ်ခဲ့ပြီး ကြည့်ရှုသူများ၏ စိတ်နှလုံး ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့သည်။'SO BAD ဟူသော သီချင်းသည် Black Eyed Pil-seung
K-POP | MoMo 기자 | 2020-11-13 19:25
Netflix ရုပ်ရှင် “Malibu Junior Rescue Team” ရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ ကိုးရီးယားဂျာမန်ကပြားလေး ပါဝင်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ကလေးသရုပ်ဆောင်နှင့် မော်ဒယ်လ်အဖြစ် ယခု ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင် နာမည်ကြီးနေသော ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွား Ella gross သည် ဂျာမန်ဖခင်နှင့် ကိုရီးယားမိခင်မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူမသည် အသက် ၂ နှစ်အရွယ်တွင် မော်ဒယ်လ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး GAP, ZARA, TOMMY HILFIGER စသည်တို့တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အမေရိက
ENT | Nang 기자 | 2020-11-13 16:04
'Idol Wonderland' teaser ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Idol Wonderland သည် Seezn နှင့် JTBC မှပူးပေါင်းပြီး Studio Lulalala မှ amusement park ပုံံစံလုပ်ပြီး ပရိသတ်များကို ဝတ်ဆင်ချင်သော dress code ကို ဝတ်ပြီး အနုပညာရှင် နှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲလုပ်သည့် စကားပြော အစီအစဥ်ဖြစ်သည်။KT ၏အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှု'Seezn'သည် ပရိသတ်များနှင့် အ
K-POP | Nang 기자 | 2020-11-13 15:59
တနင်္လာ-အင်္ဂါနေ့ဒရာမာ “Penthouse” တွင် လက်စားချေသော အကြောင်းအရာဖြင့် ကြည့်ရှုသူများပြားနေပါသည်
၂၆ ရက်နေ့ ညနေ ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်တွင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော ဇာတ်အိမ်ကို ပြသခဲ့သည်။SBS ၏ တနင်္လာ-အင်္ဂါနေ့ဒရာမာ'Penthouse'(ဇာတ်ညွှန်း Soon-ok Kim/ ဒါရိုက်တာ Dongmin Joo)၊ ၁၀ ရက် ညနေတွင် ထုတ်လွှင့်သည့် Shim Su-ryun (Lee Ji-ah မှ သရုပ်ဆောင်) သည် သူမသမီး Jo Min Hy-in ၏ ဈာ
ENT | MoMo 기자 | 2020-11-12 21:49
“The Witches” trailer ဖြန့်ချိခဲ့သည်
'The Devil Wears Prada' နှင့် 'Alice in Wonderland' ကဲ့သို့သော ပြည်သူလူထုနှစ်သက်သော ဇာတ်ကောင်ဖြင့် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် Anne Hathaway သည် The Witches၏ အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သော စုန်းမခေါင်းဆောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး မူရင်းထက် ပို၍ ကြောက်စရာကောင်းသောဇာတ်ကောင်ကို ပုံဖော်ခဲ့သည်ဟု ဝေဖန်သူများက အကဲဖြတ်လျက်ရှိသ
ENT | Khaing 기자 | 2020-11-12 21:46
Crush သည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ အားပေးမှုများကြားထဲတွင် ယနေ့ (၁၂ရက်) စစ်တပ်လေ့ကျင့်သင်တန်းစင်တာသို့ ၀င်ရောက်သည်
ပြီးခဲ့သည့် ၁၁ ရက်ညတွင် သူသည် စစ်တပ်ထဲ ဝင်မည့်အကြောင်းကို ဖော်ပြရန် “ㅂ2(တာ့တာ)” နှင့် ဓာတ်ပုံများကို သူ၏ SNS တွင်တင်ခဲ့သည်။ “Grey, Gaeko နှင့် Lee Hi” အပြင် အခြားအဆိုတော်များကလည်း 'ကောင်းကောင်းသွားပြီး ပြန်လာခဲ့ပါ'နှင့် 'ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါ'ကဲ့သို့သော အားပေးစကား commentsများကို ‌ရေးခဲ့သည်။
ENT | Khaing 기자 | 2020-11-12 21:44
ဂျပန် 「Weekly Moonchun」တွင် Arashi သည် "Last Live" ကို ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် Tokyo Domeတွင် ကျင်းပလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော နို၀င်ဘာ ၃ ရက်တွင် National Stadium ၌ ကျင်းပသော 'Arapes 2020' ကဲ့သို့ လူချင်းမတွေ့ပဲ ငွေပေးချေနည်းကို စဉ်းစားနေကြသည်ဟုဆိုသည်။၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းက အမြဲတမ်း ပါဝင်ခဲ့တဲ့ 「NHK Red and White Gaming Exhibition」မှာ ဒီနှစ်တွင်လည်း Arashiက ပါဝင်မည် ဖြစ်သော်လည်း 「NHK Red and White Gaming Exhibition」 န
ENT | MoMo 기자 | 2020-11-11 20:26
2 CHUANG 2021 논쟁 있는 1위 “응원 이든 악플이든 다 받아드리겠습니다!”
3 CHUANG 2021 3차 공연 무대, 인기 게스트 등장!
4 SEVENTEEN appeared on the American 'Ellen Show'
5 BTS 세번째 10억뷰 MV…'다이너마이트' 8개월 만에 기록
6 BTS 美 빌보드 '핫100' 18번째 1위, 싸이 빌보드 기록 깼다!
7 이보영X김서형 드라마 '마인' 포스터 공개
8 57회 백상예술대상 최종 후보 발표